Madaxweyne 1 milyan oo doolar ka qaatay dambiile aad loo raadinayay - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMadaxweyne 1 milyan oo doolar ka qaatay dambiile aad loo raadinayay
New York (JigjigaOnline) – Dacwad oogaha Magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in El Chapo Guzmán oo ah nin u xiran ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya uu lacag dhan hal milyan oo doolar siiyay nin ay walaalo yihiin Madaxweynaha dalka Honduras, si uu gacan uga geysta hakinta baacsiga ay laamaha ammaanka ku wadeen El Chapo.
Eedemahan ayaa laga hor akhriyay maxkamad ku taalla New York, halkaas oo lagu maxkamadeynayo ninka ay walaalaha yihiin Madaxweynaha dalka Honduras, Juan Orlando Hernández.
Ninkan ayaa lagu xiray hawlgal ka dhan daroogada oo ciidamada Matreykanka ay ka sameyeen Magaalada Miamo bishii Nofembar ee sanadkii hore.
Madaxweynaha oo arrinkan ka hadlay ayaa sheegay in eedeemahaas ay boqolkiiba boqol yihiin kuwa aan waxba ka jirin.
Hogaamiyahan katirsan xisbiga muxaafidka ee dalkaas ayaa tagaeero ka heysto maamulka Madaxweyne Donald Trump.
Madaxweynaha oo arrinkan beeniyay aya sheegay in xafiiska dacwad oogaha uusan marnaba soo hadal qaadin in lacag laaluush ah la siiyay.
Maxaa ka dhacay New York?
Juan Hernández, oo 41, sano jir ah, ayaa wajahaya afar dacwadood oo ay kamid yihiin in uu Mareykanka soo geliyay daroogada Cocaine loo yaqaano iyo hub sharci darro ah.
Hasayeeshee waa uu beeniyay eedeemahaas oo haddii lagu helo lagu xukumi karo xabsi daa’in.
“Eedeesanahani wuxuu galangal iyo saameynba ku lahaa walaalkii oo ah Madaxweynaha iminika ee dalka Honduras, kaas oo isagu laftigiisa lacag hal milyan oo doolar laluush ahaan uga qaatay ninka daroogada ka ganacsan jiray,” sidaas waxaa maxkamadda ka hor sheegay ku xigeenka xeer ilaaliyaha, Jason Richman.
“Laaluushka ayuu ka helay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada darooga Cocaine ee adduunka, 1 milyan oo doolarna waxaa uu ka helay rag ay kamid yahay ‘El Chapo’ iyo Sinaloa, kuwaas oo u sii marsiiyay walalkii oo ah Madaxweynahe.”, ayuu raaciyay xeer ilaaliyaha.
Xafiiska dacwad oogaha ma uusan sheegin xiliga lacagtan ay shegeen la kala wareejiystay, waxaana horaantii sanadkan Guzman lagu helay dembi ah in uu ka ganacado daroogada, laguna xukumay xabsi daa’in.
Sida uu sheegay xeer ilaliye Richman, Tony Hernández, oo horay usoo noqday xildhibaan ayaa kamid ahaa koox la maalgeliyo oo isku xiran , kuwaas oo daroogada Cocaine-ka keeni jiray Mareykanka muddo sanado ah.
Madaxweyne Hernández ayaa wajahaya caddaadis ballaaran oo ah in uu xilka ka dego, kadib markii ay soo shaac baxday arrintan waxaana lagu eedeeyay in doorahsadiisii sanadkii 2013 ka uu ku maalgeliyay dhaqaale uu ka helay qolyaha ka ganacsada daroogada.
Dalka Honduras ayaa ah dal la sii marsiiyo inta badan daroogada laga keeno dalalka Colombia iyo Koonfurta qaaradda Ameerika, waxaana dalkaas isaga qaxay kumanaan qof oo aaday Mareykanka, kuwaas oo ay la soo daristay qalalaasi iyo faqri.